नेकपा ओली समुह रामेछापको आठ वटै स्थानीय तहको इन्चार्ज तोकियो, को कहाँ ? (सूचिसहित) « Ramechhap News
नेकपा ओली समुह रामेछापको आठ वटै स्थानीय तहको इन्चार्ज तोकियो, को कहाँ ? (सूचिसहित)
नेकपा ओली समुह रामेछापको आठ वटा स्थानीय तहको इन्चार्ज तोकिएका छन् । प्रदेश कमिटीले आठ वटै स्थानीय कमिटीको इन्चार्ज तोकेको हो । तत्कालको लागि केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई नै स्थानीय कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ ।
जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँ कमिटीको इन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेललाई जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यसैगरी गोकुलगंगा गाउँपालिकाको इन्चार्जमा केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य गीता कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाको इन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेल, रामेछाप नगर कमिटीको इन्चार्जमा राजकुमार श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
त्यसैगरी मन्थली नगर कमिटीको इन्चार्जमा केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य माया कार्की, खाँडादेवी गाउँ कमिटीको इन्चार्जमा केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य एवं खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर तामाङ चयन भएका छन् ।
सुनापती गाउँ कमिटीको इन्चार्जमा केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य भुवन घिमिरे र दोरम्बा गाउँ कमिटीको इन्चार्जमा केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्य तुला प्रसाद कँडेल चयन भएको केन्द्रीय सदस्य कमल चौलागाईले रामेछाप न्युजलाई जानकारी दिए । उनले तत्काल पार्टीको आवश्यकता अनुसार नेताहरुको कार्यविभाजन गरिएको बताए ।
रामेछापमा पहिलो कोरोना भाइरविरुद्धको खोप डा. ग्वाछा र प्रमुख कर्णले लगाउने
१३ माघ, रामेछाप । रामेछापमा भोलीबाट लगाउन सुरु गरिने कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप जिल्ला अस्पताल रामेछापका
१३ माघ, रामेछाप । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य
रामेछापमा भोलीबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइने,१४ सय ७७ जनाले टिपाए नाम
१३ माघ, रामेछाप । रामेछाप जिल्लामा भोलीबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइने भएको छ । भोलीबाट
रामेछापबाट जिल्ला टप भएका काफ्ले एसपीमा बढुवा
१३ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका १६ जना नायब उपरीक्षक (डिएसपी) उपरीक्षक (एसपी)मा बढुवा सिफारिस